12 Yakakosha Home Peji Zvinhu | Martech Zone
Svondo, Ndira 29, 2012 Chipiri, May 3, 2016 Douglas Karr
Hubspot zvirokwazvo ndiye mutungamiri mukutyaira zvemukati kutyaira inbound kushambadzira zano, ini handisati ndamboona imwe kambani ichiburitsa akawanda machena mapepa, mademo uye ebook. Hubspot ikozvino inonunura infographic pane gumi nemaviri zvakakosha zveiyo peji rembwa.
Peji yekumba inoda kupfeka ngowani dzakawanda uye kushandira vateereri vazhinji vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Izvo hazvina kufanana neiyo yakamisikidzwa peji yekumhara, uko traffic kubva kune chaiyo chiteshi inofanira kupihwa yakatarwa meseji kuti itore chaiyo chiito. Mapeji ekumhara ane yakanyanya kutendeuka mwero nekuti iwo akanongedzwa uye anonyanya kukosha kune mushanyi.
Isu tinobatsira vatengi vedu mukuvaka nzira dzekutengesa dziri mukati ... uye ndinofanira kutaura kuti ndinofunga Hubspot ndapotsa mucherechedzo pane ino infographic… kune zvimwe zvakakosha zvinhu uye marongero akashaikwa mune ino infographic
Contact information - mafoni-ku-chiito zvidimbu zvakakosha zvezivo, asi havazi vese vanoda kubaya kuenda kudemo kana zvimwe zviwanikwa. Dzimwe nguva mutengi wako akagadzirira kutenga uye anongoda a nhamba yenhare or fomu yekunyoresa kutanga.
Zvifananidzo Zvemagariro - kukosha kwesocial media mukurera mutengi hakugone kutarisirwa pasi. Dzimwe nguva vanhu vanomhara pane yako saiti, asi ivo havana kugadzirira kutenga izvozvi… saka vanokutevera paFacebook, Google+ kana Twitter kuti vakuzive zvirinani.
Newsletter Kunyorera - pamwe chakanyanya kutarisirwa pasi chechero peji retsamba kunyorera tsamba. Kupa nzira yekutarisira kupinda yavo email kero uye kudzokororwa kubatwa nenhau, zvinopihwa uye ruzivo kubva kune yako mhando zvakakosha. Kubata kero yeemail kwakakosha - ita shuwa kuti iri nyore uye iri pachena pane peji rako rekutanga.
Ini ndaizopokana nekushandisa izwi iri zvinhu pa # 5 futi. Zvave zvichiratidzwa zvakapfuura uye kuti vashandisi vawanda inokwezva kune zvakanaka kwete pane maficha. Kutaura nezve yako nyowani-fangled kuzivisa hakuna kukosha ... asi kuratidza inoitika data iwe yauri kuburitsa kuti kambani iite mari iri!
Chekupedzisira, peji rako rekumba rinofanirwa kuve rakagadzirisirwa iwo mazwi akakosha ayo anonongedzera yako saiti nenzira kwayo uye nekuona kuti saiti yako inowanikwa sezvo ichikura mukuzivikanwa. SEO inofanirwa kugara ichiita chinzvimbo mune rako rekutanga dhizaini uye kusimudzira.
Tags: zvinhu zveji rejihomepage dhizainihomepage zvinhusei kutihubspot
Kutaura Kwakasununguka Hakudziviriri Mbiri Yako
Jan 30, 2012 pa 4: 54 AM
Jan 31, 2012 na12:56 PM
Jan 31, 2012 na5:18 PM